[21 / 01 / 2020] Sakaryalılar achọghị Ngwọta Nostalgic	54 Sakarya
[21 / 01 / 2020] Ihe Njikere a Maka thegbọ njem Ada Adaza Ada?	54 Sakarya
[21 / 01 / 2020] Mpempe akwụkwọ ikike enyerela maka yavuz Sultan Selim Bridge anabataghị ọzọ	34 Istanbul
[21 / 01 / 2020] Nsogbu Ballast na Ankara Sivas YHT Line! Wepụrụ 60 Kilometer Rail	06 Ankara
[21 / 01 / 2020] 8 Racha uzo eji abanye ugba ohuru nke Gaziray	27 Gaziantep
:Bọchị: Disemba 2, 2019
Nzukọ a na-ahụ maka ala ọma jijiji nke Istanbul bidoro
Okwu mmeghe nke obodo Metropolitan Municipal Ekrem İmamoğlu malitere n'okwu mmeghe, ihe egwu ala ọma jijiji nke Istanbul n'akụkụ niile nke okpokoro. Mgbapu ala ọma jijiji nke ụlọ na ọzụzụ nke ọdachi, echiche nke ndị ọkachamara obodo na ndị si mba ọzọ [More ...]
Antalya 3. Usoro Rail sistemụ Rail Starter
Antalya bidoro ịtọ ụgbọ okporo ígwè dị na usoro nke usoro nke atọ: Antalya bidoro ịtọ ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị na usoro nke atọ; Antalya Metropolitan Municipality 3rd Stage Railway Sistemụ arụ ọrụ na-aga n'ihu n'agba ọsọ [More ...]
Turkish ụgbọelu Dreamliner maka klas azụmaahịa ọhụrụ; Boeing 787-9 nwere ogologo, engine ejima na ahụ buru ibu makwaraara dị ka Dreamliner. Ọ nwere nnukwu mmiri mmiri [More ...]
Gbọ njem n'efu na 1 nde ndị nwere nkwarụ na okporo ụzọ
Transport na Infrastructure Minister M. Cahit Turhan, accessibility nke Njem Transport Services na Turkey kwuru na nọgide mmejuputa iwu nke oru ngo mgbe ọ bụla na ogbo nke njem, "akporo nke oru ngo, nke bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ikike na mkpa [More ...]
Ngwa Oroma Orange maka nogbọ njem ụgbọ mmiri anaghị ebugharị
Ngwa Oroma Orange maka nogbọ njem ụgbọ elu nke anaghị enyocha; Adil Karaismailoğlu, osote onye isi ụgbọ njem na akụrụngwa: ken Mgbe ị na-etolite ọrụ nnabata yana nzaghachi, anyị chọrọ ka elele omume ndị a dị ka ikike na ọrụ, ọ bụghị aka. " [More ...]
Ngwa Foldzmir na-eji ngwa agha igwe akpụ
Site na iji ngwa ọhụrụ nke Izmir Metropolitan Obodo, ị ga-enwe ike iji bọs ndị na-efegharị efegharị na oge ụfọdụ. Obodo ukwu a edebanyela ọrụ dị mkpa iji mee ka İzmir bụrụ “obodo ịgba agba,. [More ...]
İmamoğlu'ndan, Minista Çavuşoğlu'nun ọwa Istanbul Zaghachi na Nkwupụta
Mgbe o kwuchara okwu ya na “Nzukọ Ala Ọma Jijiji”, İBB Onye isi ala Ekrem İmamoğlu zara ajụjụ ndị nta akụkọ. Imamoglu, Mịnịsta nke mba ọzọ Mevlut Cavusoglu "Ọwa Istanbul, na-ezo aka" ihe ọgbụgba ahụ ga-efefe mmiri. " Ndị obodo Istanbul [More ...]
Nkwukọrịta Tekar-Karagöl-Kangal, Mịnịstrị, ume na eriri ọkụ Fiber Optic na nnyefe Sistem Ntinye Tender 2019 / 469865 GCC na-amachi ọnụ ahịa 14.233.356,92 TL na ihe dị ka. [More ...]
Onye Minista Ethiopiangbọ njem Etiopia gara saịtị AKH Railway
Onye Minista Ethiopiangbọ njem Etiopia gara saịtị AKH Railway; Na Etiopia, a na-arụ ọrụ na Nzuzo Xashwarị biliyan dollar 1000 nke Awash Waldia-Hara Gabaya, nke ụlọ ọrụ Turkey Yapı Merkezi Holding na-arụ. Ethiopia [More ...]
Na-enweghị ụlọ ọrụ nchara siri ike, enweghị ike ịbụ ụlọ ọrụ nchekwa dị ike
Kardemir Karabük Iron na Iron Industry na Trade Inc., Onye isi njikwa. SOYKAN Hussein, Sabah abụọ oge nke afọ a haziri ahazi nke Lutfi Kirdar Congress Center 'Turkey 2023 Summit' n'okpuru Defense Industry [More ...]
Mgbe ọ na-ekwu okwu na Nzukọ omumu ala ọma jijiji, İmamoğlu bụ Ọwa Istanbul Murder project
Mgbe ọ na-ekwu okwu na Nnọkọ Nkwado Iko nke Istanbul, a họpụtara Mayor nke Istanbul Metropolitan Municipal Ekrem İmamoğlu n'ọrụ "Channel Istanbul". Imamoglu kwusiri ike na Canal Istanbul abụghị naanị ọrụ njem ụgbọ. [More ...]
SAMULAŞ kọwara uru ọghọm dị na Publicmụakwụkwọ bara
SAMULAŞ kọwara uru ọghọm dị na Transportmụ Akwụkwọ; SAMULAS ka na-akọwara anyị. Samsun Nnukwu Obodo SAMULAŞ General Directorate, iwu nke ụgbọ njem ọha maka ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ elementrị ka a ga-agbaso na ụgbọ njem ọha gaa n'obodo, gburugburu ebe obibi. [More ...]
Izzọ Izmit Village na-emeziwanye
Izzọ Ndị Izmitl Izmit na-eme ugbu a; Obodo Kocaeli, nke jigoro mkpa dị ukwuu maka ọrụ ụgbọ njem, na-arụ ọrụ okporo ụzọ, ịrụzi yana ndozigharị n'obodo na obodo. Ihe owuwu na - aru ​​oru na uzo a [More ...]
Mgbatị ESHOT Na-enweta Nri zuru ezu site n'aka ndị ọkachamara
Mgbatị ESHOT na-enwetazuzu akara n’aka ndị ọkachamara; ESHOT General Directorate Gediz Nnukwu Mmezi Ebe ala ọma jijiji ahụ na ihe ndị ọkụ gbara bụ nkeji na-atọ ụtọ. Izmir Metropolitan Municipal ESHOT General Directorate, dị ka iwu si dị mgbe niile [More ...]